जिग्रीलाई छाडेर रक्षा अन्तै मोडिन्, को हुन् रक्षाको नयाँ प्रेमी ? (भिडियो) | Celebrity Nepal
जिग्रीलाई छाडेर रक्षा अन्तै मोडिन्, को हुन् रक्षाको नयाँ प्रेमी ? (भिडियो)
रोल्पा जिल्लामा जन्मिएर हाल राजधानीमा गीतसंगीतको क्षेत्रमा संघर्षरत गायक दिवस पुनको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । २०६३ सालको सुपा आईडलको विजेता बनेका पुन विगत १० वर्ष देखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
गीतको भिडियोमा म्यान्डी, रक्षा, र भानुको केही रमाईलो र केही जीवन भोगाइका कथाहरुलाई समेटिएको केमेष्ट्रिलाई हेर्न सकिन्छ । गीतसंगीतमा लामो समयको सिकाई र भोगाईपछि बजारमा ल्याएको आफ्नो गीतलाई दर्शक स्रोताले मन पराउने आशा लिएको गायक पुनले बताए । भिडियो हेर्नुहोस्
चैत्र ३ गते बत्तिसपुतलीमा भृकुटीलाई भेट्न जाने हो ?
सुपरहिट अविवाहित महिला सेलीब्रेटीहरु: को को परे त यो लिस्टमा ? हेर्नुहोस् भिडियो